kkchha.com:: सरकार संविधान आयो तर जनताले के पायो
सरकार संविधान आयो तर जनताले के पायो
By प्रकाश धिताल September 19, 2016
केके छ डट कम परिवार – काठमान्डौ – असोज ०३
मेरो देशमा संविधान आयो तर जनताले के पायो ? हुन त पहिला देखि नै नेताहरुमा जंगलिपन देखिदै आएको छ । आफु पनि नगर्ने अरुले गर्न खोज्दा पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले आज मेरो देशको अवस्था नाजुक छ । संविधान आयो तर जनताले के पायो भन्दा महंगी,आन्दोलनको सास्ती, बन्द हड्ताल, टायरको धुँवा, अनि पुलिसको लाठि नाकाबन्दी पायो । संविधान आयो नेताहरुले के पायो भन्दा कुर्सि, सत्ता, पजेरो, पैसा, भमण , सत्ता मोजमस्ति र भोजभतेर पायो । देशमा गणतन्त्र पनि आयो तर जनताले के पायो भन्दा हातमा लाग्यो सुन्य पायो ।
नयाँ नेपाल र नयाँ संविधानको नाराले जनताको मुख थुन्न प्रयोग गरि नै रहे, न त नागरिक सर्वोच्चता स्थापित भयो न त नयाँ नेपाल बन्यो ? के संविधान भनेको यहि हो ? मै खाँउ मै लाँउ सुखसयल वा मोजमस्ति मै गरूँ भन्नेले गर्दा आज मेरो देशमा के-के भयो ।
असल बिचारधाराका भन्दा पनि कुर्सि र सत्ताको लागि मरिमेट्नेको बिगबिगि भो । पैसामा पाएदेखि आमा पनि बेच्न पछि नपर्ने जालिहरुको संख्या धेरै भो । जनतालाई आफु कुर्सिमा पुग्न प्रयोग गर्ने खेलौना सम्झने नेताहरुले गर्दा आज देशको अवस्था डामाडोल छ । काम भन्दा बढि कुरा गर्नेले गर्दा आज देश हावामा उडेको छ । अझ नेताहरु सत्ताको लागि कुकुरले हडडि नछाडेझै गर्छन । जनतालाई ठगी खान तिमीलाई कसले सिकायो सिंहदरबारको भित्तामा दुईटा प्रधानमन्त्रीको फोटो टास्नु बाहेक केही उपलब्धि भएन । झण्डै ८ वर्षदेखि राजनीतिक पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा एउटा भूमरीमा परेजस्तो, चक्रब्युहमा परेजस्तो भएका थियौं। यसकारण आम नेपाली जनतामा ठूलो चिन्ता र छटपटीको अवस्था आएको छ। यो बीचमा विनाशकारी भूकम्प आएपछि त्रासदीको अवस्था बन्यो त्यसपछि यो राष्ट्रको भविश्यबारे चिन्ता उत्पन्न गरायो।
यो परिवेशले केही प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले १६ बुँदे सहमति मार्फत चक्रब्युह तोड्ने र भूमरीबाट उम्कने जमर्को मिल्यो। यो एउटा साहस थियो वा दुस्साहस थियो। यो त इतिहासले मुल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर फेरि अर्को संविधानसभा पनि असफल हुने हो कि भन्ने जनताको मनमा जो उठ्दै थियो। त्यसको सकारात्मक उत्तर चाहिँ दियो।अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा चौतर्फी छलफल बहस तरंग छ। प्रत्येक पार्टीभित्र छलफल बहस छ । पार्टीपार्टीबीचमा छलफल बहसहरु छन्। संविधान निर्माण भएसंगै सुरु भएको विवाद अहिलेपनि जारी छ । एकअर्कालाइ आरोप प्रत्यारोप लाउने पद्वती नै संविधान कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण हो। संबिधान दिवसको सबैमा शुभकामना । संबिधान लागु हुन सकोस समय सापेक्ष बन्दै जाओस ।